Happy Father Day ~ Nge Naing
Sunday, September 06, 2009 Nge Naing 13 comments
Even though you get me mad.
Even though you haveasore knee.
You take me to Saturday school
But you always need to go to the loo.
Although you are funny
You never forget to give me money
This is my present for you today
"Thank you very much dad" I say
(Mg Toee Nanda)
ဖေဖေဟာ သားသားကို အရူးလုပ်တတ်ပေမယ့်
ဖေဖေ့ကို သားသား ချစ်ပါတယ်။
သားသားအတွက် အရာအားလုံးကို ဖြည့်ဆည်းပေးပါတယ်။
ဖေဖေဟာ သားသားကို စနေနေ့ ကျူရှင်ပို့ပါတယ်
ဒါပေမယ့် ကျောင်းရောက်တိုင်း အဖေဟာ အိမ်သာပြေးဖို့ အမြဲကြုံရတယ်။
ဒီလို ရယ်စရာဖြစ်လောက်အောင် မအောင့်နိုင် ဖြစ်နေတဲ့ကြားက
ဖေဖေဟာ သားသားကို မုန့်ဖိုးပေးခဲ့ဖို့တော့ တခါမှ မမေ့ခဲ့ပါဘူး။
ဖေဖေ့အတွက် သားသားရဲ့ ဒီနေ့လက်ဆောင်ကတော့
“ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် ဖေဖေ” လို့ သားသားပြောပါတယ်
ပျော်ရွှင်သော အဖေနေ့ဖြစ်ပါစေ။ ။
ကျွန်မသားလေးက သူ့ကို မခံချင်အောင် အမြဲပဲ လိုက်စတတ်တဲ့ သူ့အဖေကို အိမ်ကမထွက်ခင် ကိစ္စပြီးအောင် မလုပ်ခဲ့ပဲ သူ့ကို ကျောင်းပို့ရင်း ကျောင်းရောက်မှ ဒီလိုပဲ မကြာခဏ ပြာယာခပ်ပြီး အသဲအသန် အိမ်သာရှာရတဲ့ အဖြစ်ကို အကြောင်းပြုပြီး ဖခင်များနေ့နဲ့ ကြုံတုန်း သူက ဒီကဗျာနဲ့ သူ့အဖေကို ပြန်စထားတာ ဖြစ်တယ်။
Posted in: ကဗျာ,ဓါတ်ပုံ,သားသား,အချစ်/မေတ္တာ
September 6, 2009 at 4:12 PM Reply
September 6, 2009 at 5:23 PM Reply
မငယ်နိုင် ရေ..သားအဖ တွေ ကြည်နူး ပျော်ရွှင်စရာ။ သားလေးက.. အမေတူလား..အဖေတူလား..ကဗျာတွေ တောင် စပ်နေပီ.း)
September 6, 2009 at 9:31 PM Reply
September 6, 2009 at 10:08 PM Reply
ကောင်းလိုက်တဲ့ ကဗျာ !!!
Yu Wa Yi says:
September 6, 2009 at 11:35 PM Reply
September 7, 2009 at 2:56 AM Reply
အမ ရေ ..တူတော်မောင်ကဗျာ ကို ဖတ်ပြီး ...။
ခုမှပြန်လာမန့်တယ်။တော်လိုက်တာနော် ကျွန်တော်တို့ တုန်းက ဒီအရွယ် ဖခင်ကို လက်ဆောင်ပေး ဖို့ ကဗျာ ရေးဖို့ နေနေသာ ကစားကောင်းတဲ့ အရွယ်ဗျို့...။
အဟတ် ..အကိုတို့ များနော် နာမည်ကြီးချင်တော့ အဲလိုပဲ သား သား က ဒါရိုက်တာ
အမေက ထုတ်လုပ်သူနော်..အကိုတော် ကတော့ နာမည်ကြီးမင်းသား ကိုဖြစ်ကရော...။အဟဲ...စတာနော် စိတ်မဆိုးရဘူး။
September 7, 2009 at 4:06 PM Reply
September 7, 2009 at 11:42 PM Reply
ဥာဏ်ကောင်းတဲ့သားလေးက သူ့ဖေဖေကို တရင်းအနှီး ချစ်စနိုးကျီစယ်ပုံက အသည်းယားစရာ။
September 8, 2009 at 8:29 AM Reply
7 Sep 09, 13:44
nn: အင်းး.. တော်လိုက်တဲ့ ကလေးလေး.. ချစ်ဖို့ ကောင်းတဲ့ စိတ်ကူး.. ထက်လိုက်တဲ့ ကဗျာဥာဏ်.. ဝမ်းသာကြည်နူးမှု ပြည့်သွားမယ့် အဖေနေ့ .. အင်း ဖတ်တဲ့သူလည်း ကြည်နူးတယ်.. လိပ်စာတော့ ထားခဲ့တယ် မငယ်နိုင်.. အားတော့နာတယ်
7 Sep 09, 23:33
ဘုန်း: ကဗျာလေးက ချစ်စရာ၊ပီတိဖြစ်စရာတွေနဲ့ စုံလို့ပါပဲ ကောင်းတယ်။
6 Sep 09, 22:40
mie nge: သားသားရေးတဲ့ကဗျာလေးဖတ်သွားပါတယ်။
September 8, 2009 at 8:41 AM Reply
ကဗျာလေးက ချစ်စရာကောင်းလိုက်တာ ဖတ်ရတာ သိပ်ကြည်နူးစရာကောင်းတာပဲ =)
September 8, 2009 at 6:08 PM Reply
သားသား ကဗျာလေးကို လာရောက် အားပေးသွားသူ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ မကေသွယ်မေးတဲ့ အမေတူလား အဖေတူလားဆိုတော့ အမေနဲ့အဖေ တယောက်မှ ကဗျာမစပ်တော့ ဘယ်သူ့နဲ့မှ မတူဘူးလို့ ပြောရလိမ့်မယ်။
September 11, 2009 at 3:44 PM Reply
အင်္ဂလိပ်ကဗျာ ရေးတတ်တဲ့သားကို အီး(english)ကဗျာ တခါမှ ရေးဖို့မစဉ်းစားဖူးတဲ့
သားသားကို ဘာသာပြန်ဆို ပြောပြပေးပါနော်။
ကိုအိုးဝေ ကျွန်မသားက ဗမာလို နားလည်ပါတယ်။ ပြောတာပဲ သိပ်မသန်တာပါ။ ဖတ်ပဲ ဖတ်ပြစရာ လိုပါတယ်။ သားကို အားပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးနော့်။ သူလည်း သူ့ကို ချီးကျူးပြီး မှတ်ချက်ပေးထားရင် ပျော်တတ်နေပြီ သိနေပါပြီ။ အရင်ကဆို မြန်မာစာကို သင်ဖို့ စိတ်မ၀င်စားပေမယ့် အခုတော့ ရေးထားတဲ့ စာတွေကို လိုက်လိုက် ပေါင်းဖတ်တတ်လာပြီ။ ဒါနဲ့ပဲ သူမြန်မာစာသင်ဖို့ကို ပိုပြီး စိတ်ဝင်စားအောင် စည်းရုံးနေရတယ်။